Glass - yezinto esiyingqayizivele kunazo zonke ezake wadala umuntu. Ukusetshenziswa kabanzi kunazo ithole emaqaqasini izindlu, hhayi kuphela iwindi glazing.
Kuze kube muva nje, saqiniseka ukuthi indlu ezweni kufanele kwenziwe ngempela emthini. Lesi sakhiwo elihlangabezana nazo zonke izidingo wenduduzo ngokuphelele evumelana sezulu sethu. Okuwukuphela ethile yendlu ngokhuni - ukuntuleka ukukhanya. Ngisho uma namafasitela amakhulu emakamelweni namanje emnyama kancane. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi abaklami abaklami ukunikela ukuba bazohlala endlini ngengilazi.
I-Glass House, a fabulous emoyeni "esigodlweni", sibonga yesimanje wokwakha ubuchwepheshe, isibe into ngempela. Lena akuyona izakhiwo nje, lapho kukhona namafasitela amakhulu namabhodlela mbumbulu. Sekuvele kukhona ekhaya, lapho cishe zonke izinto ezenziwe kwanele ukubheka izinto obucayi: izindonga, ophahleni, phansi, izicabha, ngodonga ngisho izitebhisi.
Ngo zindlu ukudala isimo airiness kanye lightness ongavamile. It blurs imingcele ephakathi isikhala elingaphakathi futhi imvelo. I ingilazi mbumbulu uvumele engadini ubunyoninco zasemazweni, uphahla ingilazi - ubuhle kanye imfihlakalo isibhakabhaka ebusuku. Elikhulu amafasitela-panoramic ngesimo izindonga ngokuhambisa usebenze kanye namafasitela, futhi izindonga asekelayo, neminyango ekahle ukuze kube emphemeni noma ensimini.
Lezi zindlu emangalisayo lingakhiwa njengoba ingilazi egcwele, futhi babe kuphela elicwebezelayo esinqunyiwe. Glass endlini - akusiwona iso evamile evamile "ibhokisi", kanye nomklamo okumangalisayo odlulela Isikhala bawakhohlise ukuthi njalo abahlala imvelo, futhi endaweni ezungezile is ngokoqobo "ukuphefumula" umoya ohlanzekile futhi ageze ilanga.
Izazi zokusebenza kwengqondo zithi abantu kuleli gumbi sinda futhi aziphumulele. Nokho, ngempela kuphela kodwa zasibekela umbandela wokuthi akukho umuzwa ukuhlola njalo kanye nokuqapha. Uma namathafa ezizungezile bakhathele, noma ukuphila, noma ngaleso sikhathi, kodwa lamabutho ephelele evela emhlabeni, ungavele ukudweba amakhethini, okuyinto anikezwa ngendlela ukwakhiwa okunjalo. Bese isikhala esobala baguqulelwa isiko.
Naphezu fragility yayo sobala, ingilazi endlini - ukwakhiwa eziqinile kakhulu. Uma wadala ngokusebenzisa ephezulu amandla ingilazi elihlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha nokwethembeka. It kuveza ubuchwepheshe besimanje, it has a Ukwakheka akhethekile waphasisa ukuphathwa ngendlela ekhethekile. Ngokwesibonelo, ingilazi laminated sakhiwa izingqimba eziningana ukujiya ezahlukene, futhi ingilazi omnene unamandla izikhathi 10 kuka ezivamile. I ingilazi kungenzeka esobala ngokuphelele futhi opaque, kancane ehlotshisiwe imidwebo ibala , noma umphumela wamaphaphu sebethule.
Lapho wakha indlu sebenzisa izinto esiyinhlanganisela, slate esobala, Plexiglas, ingilazi, kwagcwala ifilimu ekhethekile, noma ingilazi polymers. Glass lezivalo zendlu ngeke awuvikele Ukungena izivakashi engadingeki. Esimeni zokugwema ukuphuka, izingcezu azigcwelanga, lisebenzisa anezikhala okhethekile metal. Ukuthembeka incike design kohlelo iphrofayela ezenziwe ngokhuni, upulasitiki, noma ngensimbi. Indlu ufake zonke kunesidingo zokuxhumana ukuvumela ukuba aphile ngezimo esiphila kuzo impucuko, alikho "okulawulwa yikhompiyutha."
Glass indlu ngokuvamile eyakhelwe abantu zokudala ukuba nothando imvelo. Kodwa Site ukuphila abathandi ethusayo, okwenza izimpilo zabo uhlobo kakhulu, kusetshenziswa umphakathi "touch." Ukuvakashela leli ikhaya eyingqayizivele ngempela kubangele eziningi imizwelo, ngoba indlu ka ingilazi ngeke abashiye ubani nandaba. Ngaphezu kwalokho, yesimanje izixazululo ukuvumela ukudala izakhiwo ezinjalo hhayi kuphela bendabuko ingilazi-isitayela zobuchwepheshe, kodwa futhi ku Baroque isitayela, yesimanje, Rococo. A endlini, ovuthayo kusuka ngaphakathi, kubonakala esigodlweni real kakhulu inganekwane futhi ubukeka zikanokusho.
Yikuphi laminate kangcono? ukukhetha lesifanele